I-Fletcher Bay Garden Retreat
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMarjorie
Le ndawo yabucala kwaye yahluke ngokupheleleyo kwi-300 indawo yonyawo lwesikwere ibekwe kwiinyawo ezili-100 emva kwendawo yokuhlala ephambili. Njengoko ugutyungelwe lihlathi eliqolileyo, uziva ngathi uhlala kwindlu yemithi. Umgangatho ophakamileyo unemigangatho yomthi oqinileyo, i-intanethi, ibhedi elingana ukumkanikazi, indawo yokuhlala epholileyo kunye nekhitshi. Ingqwalasela kaMarj kwiinkcukacha kunye nothando lwezinto ezifunyenweyo zakudala zibonakala kwindawo enomtsalane kunye neyamkelekileyo. Relax kwaye umamele amanzi athontsiza echibini ngaphandle kwegumbi lakho.
I-loft ihlalisa ngokukhululekileyo abantu abangabodwa, izibini, abantwana okanye umntu omdala wesithathu.
Igumbi eliphezulu liza line microwave, ioveni yetoaster, ikofu yeKeurig, iketile yamanzi ashushu, kunye nefriji encinci kwaye igcwele ikofu, iti, iyogathi kunye negranola. Kukho ibhedi ekhululekileyo elingana nokumkanikazi kwaye iwele livuthela umatrasi we-Serta kunye nempompo yangaphakathi egcina uxinzelelo kwindawo yakho yokuthuthuzela oyifunayo. Ungasebenza okanye utye kwitafile enwebekayo enezitulo ezibini ezitofotofo. I-TV ye-intanethi nayo ibonelelwe. Imithwalo yemithwalo kunye nebhodi ye-ironing igcinwe kwi-closet.
Zulazula kule ndawo intle kwaye ujonge igadi ekhethekileyo kunye nengaqhelekanga. Wamkelekile ukuba ucwangcise ukhenketho lwabucala lwebala noNick, umnini kunye nomgadi wegadi okhokelayo.
Ubumfihlo bakho buhlonitshiwe. Unokuhlala uthule kwindawo yakho yokubalekela, kwaye uze uhambe njengoko uthanda.
IFletcher Bay Garden Retreat ibekwe kumbindi weSiqithi saseBainbridge, malunga nemizuzu eli-10 ngemoto ukusuka kwisikhululo sephenyane. Yimizuzu ukusuka kwiLali yasePleasant Beach kunye neZiko leLynnwood elisandula ukulungiswa kubandakanya iTree House Café kunye neMbali yeLynnwood Theatre. Ilali ibandakanya iivenkile ezonwabileyo, ibha yewayini kunye neendawo zokutyela ezahlukeneyo kubandakanya neNdawo yokutyela yaseBeach House. Kufuphi kwaye kuyathandeka kuzo zonke iintliziyo zaseIslanders, yiWalt's Grocery apho unokuthatha khona izinto eziyimfuneko kunye nesampulu yebhiya kaWalt yasekhaya kunye nokhetho olukhulu lwewayini. Ukuba unomdla wokuqhubela phambili, ungandwendwela iHlathi eliMkhulu, iBloedel Reserve eyaziwayo, amabala egalufa, idolophu yaseBainbridge Island kunye neBainbridge Island Museum of Art entsha nedume kakhulu. Iidolophu ezikufuphi zibandakanya iPoulsbo kunye nePort Townsend apho kuninzi ukuthenga, ukhenketho kunye nokutya kuninzi. Kwaye kunjalo, iSeattle yimizuzu engama-35 kuphela yokukhwela isikhephe!
Qhuba kwisikhephe okanye ufike kwiPeninsula yaseKitsap. Ukuba awufuni ukujongana nemoto, bamba iteksi ukusuka kwiSiteshi seFerry Island yaseBainbridge okanye ukhwele ibhayisekile yakho (indawo yokugcina iyafumaneka).
Ngexesha elininzi lonyaka ababuki zindwendwe bakho baqhuba iintyatyambo zeFletcher Bay, intyatyambo ime phezu kwedrive yabo. Indawo yokuma iyintandokazi yabahlali kwaye ihlala iqhayisa nge-plethora yazo naziphi na iintyatyambo ngexesha lonyaka.
Ababuki zindwendwe bakho baya kuqinisekisa ukuba indawo yakho ineziseko ezimbalwa zesidlo sakusasa kusasa kwakho okubandakanya ukulungiswa kwekofu, igranola kunye neyogathi. Unokucwangcisa usuku lwakho ngelixa uphunga ikofu yakho yasekuseni!
Iindwendwe zifikelela kwindawo ngephedi yesitshixo.
4.96 out of 5 stars from 690 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-690
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi690
Umbuki zindwendwe ngu- Marjorie
U-Nick uhlala esekhaya kwaye uyafumaneka ukuphendula imibuzo okanye ukukhokela ukhenketho lwegadi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bainbridge Island